Wararka Maanta: Khamiis, Sept 27, 2012-Mas'uuliyiin ka tirsan Xisbul Islaam oo laga qabtay Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo iyadoo lasii daayay Wadahadallo Kaddib
Labada mas'uul ee la qabtay ayaa kala ahaa: Sheekh Maxamed Macallin Cali iyo Sheekh Xasan Mahdi oo labadaba ka mid ahaa saraakiishii ururkii Xisbul Islaam oo ku biiray Al-shabaab sannadkii 2010, kaddib culeysyo milateri oo ururkaas la saaray.
Saraakiil ka tirsan maamulka Puntland oo si hoose saxaafadda ula hadlay ayaa sheegay in labada mas'uul ay kasoo dageen garoonka gaalkacyo toddobaad ka hor ayna daba-gal ku hayeen tan iyo xilligaas, ugu dambeynna la qabtay xilli ay doonayeen inay dhoofaan.
Inkastoo aan la sheegin halka ay u dhoofayeen iyo halka ay markii hore ka yimaadeen ayaa haddana, saraakiishu waxay sheegeen in tan iyo xalay ay xabsiga ku jireen, balse wadahadallo dheer kaddib ay maanta sii daayeen.
Sheekh Maxamed Macallin oo ahaa xogyihii Xisbul Islaam ayaa laba maalmood ka hor u sheegay warbaahinta inay go'aansadeen inay ka baxaan Al-shabaab ayna la hadlaan cid walba oo ay u arkaan inay waddo maslaxadda ummadda Soomaaliya.
Maamulka Puntland ayaan weli ka hadlin arrintaan, iyadoo sidoo kale labada mas'uul aysan ka hadlin xarigga loo geystay, sababta ay gobolka Mudug u tageen iyo halka ay ku socdeen intaba, iyadoo aan la ogeyn inay dhoofeen iyo inay weli ku sugan yihiin gobolka Mudug.
Degmada Xarardheere ee gobolka Mudug oo ay gacanta ku hayso Al-shabaab uu ku sugnaa bilihii ugu dambeysay Maxamed Cismaan Caruus oo ahaa afhayeenkii Xisbul Islaam, balse markii dambe ku biiray Xarakada Al-shabaab.